250W mercury vapor bulb ada nnọchi China Manufacturer
Nkọwa:Ngwá Ọrụ Na-agbanwe Azụ,Nnọchite anya maka nnukwu nrụgide sodium,Mercury Vapor Bulb Led Replacement
Home > Ngwaahịa > Mgbanwe Ngwunye nke Mmiri nke Ọkpụkpụ > 250w Metal Halide Led Replacement > 250W mercury vapor bulb ada nnọchi
Ngwá Ọrụ Na-agbanwe Ngwá Ọrụ Anyị na- eji nkà na ụzụ na-emepe emepe nke dị elu nke US E39. Nke a 80w na- anọchite anya nnukwu nrụgide Sodium nwere ebe obibi ntinye ma jikọọ na E39 Screw Bases. Biko rịba ama na a ga-agafe ballast mgbe ị na-agbanwe na Mercury Vapor Bulb Led Replacement . Anyị s uper na-egbuke egbuke mere bọlb mogul isi 80w bụ 9600 Lumen, dị ọcha na-acha ọcha 5700K, E39 oghere, 80W led retrofit for metal halide equal 250W incandescent bulb. A na-eme ka anyị gbanwee anyị maka ọkụ sodium ka ìhè ghara ịchọta ozugbo mgbe agbanwụrụ ọkụ ọkụ ahụ. Enweghịzi ichere bulbs iji "kpoo ọkụ" ma ọ bụ gbanwee n'ụzọ niile!
Ngwá Ọrụ Na-agbanwe Azụ Nnọchite anya maka nnukwu nrụgide sodium Mercury Vapor Bulb Led Replacement Ngwunye Ngwá Ọrụ Na-agbanwe N'ihu Ngwá Ọrụ Ndị Ngwá Agha Ngwá Ọrụ Ụlọ Ahịa Igwe ọkụ anyanwụ Egwuregwu Ngwá Ọrụ Na-arụ ọrụ